I-Nardaran (Dlulisa Mahhala)
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Jalal
Indawo yangempela yokuphumula wena nomndeni wakho. Kukhona ithenisi, ibasketball, amathuluzi amabhiliyade egcekeni. Igceke elihlukile lezingane kanye nezinhlobo zokudlala zemishini yezingane zakho zenzelwe ukwenza izingane zakho zijabule.
Lena indawo yokuphumula ngempela.Ezihambeni egcekeni kukhona i-tennis, basketball, billiards.Kunemibandela yokuthi izingane zijabule.
Zonke izakhiwo ziyatholakala
I-Nardaran amac itholakala emizuzwini engama-30 ukusuka enkabeni yedolobha kanye nemizuzu eyi-15 ukusuka esikhumulweni sezindiza. Kukhona i-KFC, iMcDonald's, icinema kanye nemakethe yeBravo eduze kwendlu. Futhi eduze nezikhungo zokungcebeleka ezidume kakhulu ezweni njenge "Amburan" ne "Sea Breeze". Imizuzu eyi-10 ukuhamba ibanga ukuya eCardiological Sanatorium, edume ngesamba esikhulu se-iodine yamanzi. Umbono omuhle wolwandle. Imizuzu engu-15 nje uhamba ngezinyawo uye olwandle.
Ukudluliswa kwamahhala kusuka esikhumulweni sezindiza kuya ku-villa ye-Amac.
Eduze kwendlu kukhona: "Bravo" imakethe - uchungechunge olukhulu kunazo zonke zamaketanga emakethe e-Azerbaijan, KFC, McDonald's, i-cinema, enye yezikhungo zokungcebeleka ezidume kakhulu ezweni - "Amburan" "Bona i-Breeze";
futhi kude nendlu kune-Cardiological Sanatorium, eyakhiwe lapha ngenxa yobuningi be-iodine emanzini.
Ukusuka endlini ukuya olwandle ngezinyawo imizuzu eyi-15. hamba ngezinyawo (cishe i-1km) .Ukudluliselwa kwamahhala kwesikhumulo sezindiza ukuya e-Nardaran Amaka Villa
Ngilungele nganoma yisiphi isikhathi sosuku ukusebenzela izivakashi.